Hazakaza-tsoavaly : Ny pmu Bet sisa no afaka mitrandraka ireo hazakazaka frantsay eto Madagasikara -
AccueilVaovao SamihafaHazakaza-tsoavaly : Ny pmu Bet sisa no afaka mitrandraka ireo hazakazaka frantsay eto Madagasikara
Taorian’ny olana nisy teo amin’ny ACHEL na ny sampandraharaha manana fahefana mpikarakara momba ny soavaly ho an’ny hazakazaka sy ny fiompiana eto Madagasikara sy ny PMU Madagascar, dia nivoaka ny 30 marsa 2018 teo ny didy iraisan’ny minisitera fa manomboka tamin’io andro io dia ny Pmu Bet ihany no hany afaka mitrandraka ireo hazakaza-tsoavaly frantsay eto Madagasikara, araka ny fanambarana avy amin’ny komity mpitantana ny AHCEL. Minisitera efatra no niara-nanao sonia izany didy izany araka ny tatitra avy amin’ny Ahcel ihany. Ny Pmu Madagascar no hany tokana nanana io fitrandrahana io teo aloha hatramin’ny fatapahan’ny fifanarahana teo amin’io orinasa io sy ny Pmu France izay tompon’ny vokatra. Efa niakatra fitsarana teny anivon’ny tribonaly frantsay rahateo ny raharaha, ka tsy nahazo rariny tamin’ny fitoriana nataony ny Pmu Madagasikara.
Raha tsiahivina, dia niainga avy amin’ny tatitry ny ACHEL tamin’ny PMU France ny tsy fanajan’ny fifanarahana teo aminy sy ny PMU Madagascar ny fampiatoana. Niainga tamin’ny fidiran’i Madagasikara tamin’ny lalao iraisan’ny firenena maro na ny « Mass commune » izay niditra teto amintsika nanomboka ny volana mey 2017 tamin’ny alalan’ny PMU bet, ny tsy fanajana ny fifanarahana nataon’ny PMU Madagascar, ka tao anatin’izany ny tsy fandoavana araka ny tokony ho izy ilay 5% azo avy amin’ny fitrandrahana ireo lalao avy amin’ny hazakaza-tsoavaly sy ny 20% n’ny tamberin’ireo asa mifandraika amin’izany . Manampy ireo ny tsy fahafahan’ny Ahcel intsony manara-maso ny fomba fiasan’io orinasa io amin’ny fitantanana ny vokatry ny lalao sy ny vola zaraina. Maro rahateo ireo mpilalao no efa nametraka ahiahy ny amin’ny isan’ireo mpilalao tena mahazo, indrindra amin’ny fotoana maha-be ny tontona. Io didy iraisan’ny minisitera io dia manamafy ny fanakanana efa nataon’ny Pmu France ny tokony tsy hisintonan’ny PMU Madagascar intsony ireo fampahafantarana samihafa momba ny hazakazaka mitranga ao anatin’ny « Infocentre » sy ny fandefasana ny « Equidia Pro » nanomboka ny 2 janoary 2018. Araka io taratasy io, dia tsy manana intsony zo hampilalao olona amin’ireo hazakazaka frantsay ny PMU Madagascar.